Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Robo si Nigeria & ụwa | TAA
Mba United Nations na-echeta ndị ọrụ 140 dara ada
UN Security Council nọ na-eru uju ọnwụ nke onye nnọchianya Ivory Coast
Abuja hawkers na-arịọ gọọmentị ka ha nye ụlọ ahịa ọnụahịa, mgbazinye ego
Bill Corps Bill: Onye nyere iwu na-ewebatara Emir nke Daura
Danny Ings: Ihe ọ bụla dị njọ maka Sadio Mane
Home Tags FC Robo
Lobi Stars 'Anthony Okpotu na-enweta ndi nsonye akwukwo' NPFL Player nke Season Award
Anthony Okpotu bụ onye na-egbu egwuregwu na Lobi Stars bụ onye mmeri kachasị ukwuu na Nkwekọ Bloggers nke afọ a (LBA) mgbe ọ nyesịrị ndị NPFL Player nke Oge nakwa na Top Score Awards.
Danny Ings na-ekwu na ọ bụ àgwà Sadio Mane ka ekwusiri ike na ọ bụ na ọ bụ oge dara ogbenye.
UN nwere ememe ncheta iji chetara ndị ọrụ 140 bụ ndị tụfuru ndụ ha n'etiti ọrụ July 1, 2016 na Dec. 31, 2017.
Ụlọ Nche ahụ kwadoro na Thursday ka onye nnọchianya diplomacy Bernard Tanoh-Boutchoue, onye nnọchianya nke Ivory Coast na United Nations bụ onye nwụrụ na ọnwa ole na ole mgbe ọ malitechara afọ abụọ na òtù kasị ike UN.
Michelle Williams, onye bụbu Destiny's Child, ama ọkwa ọkwa ya na pastọ Chad Johnson.
Ndị na-eme njem na Federal Capital Territory (FCT) arịọla gọọmenti ka ha nye ụlọ ahịa ndị nwere ọnụ ahịa ma kwụ ụgwọ maka azụmahịa ha ka ha ghara ịga n'okporo ámá n'okporo ámá.
2019: Chineke ga-egbochi nhoputa ndi isi ochichi Buhari - Obasanjo bu nwunye ya
Nwunye nwunye ya nke bubu onye isi oche nke president Olusegun Obasanjo, Taiwo Obasanjo kwuru na Chineke aghaghi igbazi okwu nke isi nke President Muhammadu Buhari, otu uzo okwu ato nke Obasanjo mebiri na 2005.
New round nke South Sudan okwu udo na-egbu oge
Ndi ochichi kwuru na okwu udo udo nke South Sudan abughi oge n'amaghi nghota.
South Africa na-akwado Morocco maka 2026 World Cup
Njikọ bọl na South Africa na-ekwe nkwa na Morocco "nkwado na-erughị eru" n'ọchịchọ ya iji kwado 2026 World Cup.
Ndị na-eme egwuregwu Taekwondo nke Nigeria malitere ịkwadebe maka 2024 Olympic
Ndi Taekwondo Naijiria na Naijiria amalitela nkwadebe maka Olympics nke 2024 na enyemaka nke Korea Cultural Center, Nigeria (KCCN) na Abuja.
Senator Sani: A na-ebuli elu ọrụ n'aka President Buhari
Onye isi oche, Kọmitii Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ na Obodo Ndị Ọzọ, Senator Shehu Sani, ekwuwo na ọ bụ ọchịchị President Muhammadu Buhari ka e mere ka ọ dị elu na ọkwa ọkwa.
Ndị NAFDAC na-ejide ọgwụ ọjọọ na-efu N5 nde na Abia
Nleta ụlọ ahịa nwere ike ibuli ọtụtụ nde mmadụ site na ịda ogbenye - ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze
Nestle Nigeria na-ekpuchi 2017 na N1,555.99 kwa òkè
Bishop Kukah: Ntak North ga-agbapụkwa President Buhari ọzọ
Manchester City n'etiti ìgwè ndị kachasị ukwuu nke Njikọ
SGF: 257 na-anwụ n'ihi ndị na-azụ anụ-ndị ọrụ ugbo na-akpagbu afọ a